Wasiirka maaliyadda oo aad uga carootey canshuuro lala fakadey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka maaliyadda Magdalena Andersson. sawir: Alexander Larsson Vierth/TT
Wasiirka maaliyadda oo aad uga carootey canshuuro lala fakadey
Wasiirka maaliyadda oo ka carootey warbixino la xiriira canshuuro lala fakadey
La daabacay måndag 6 november 2017 kl 10.39
Maalintii axadda ayaa si rasmi ah loo soo bandhigey qeybo ka mid ah qoraalo muujinaya sida dad lacag leh iyo kuwa caan ahiba ey cashuuraha ey bixiyaan hoos ugu dhimaan.
Qoraaladaan ayey faafisey shirkad qareen oo lagu magacaabo Appleby. Wasiirka maaliyadda dalkan Sweden Magdalena Andersson ayaa falkan aad iyo aad uga carootey, in kastoo xataa laga yaabo in canshuurahaas lala fakadey ey hab sharciga waafaqsan mareen.
Wasiirka maaliyadda Magdalena Andersson ayaa sheegtey in aan la aqbali karin in dadka tujaarta ah ee caalamku ey awwoodooda iyo xeelahooda oo dhan isugu geeyeen sidii ey canshuur bixinta uga fakan lahaayeen taas oo ah arrin aad iyo aad khatar u ah, ayey tiri Magdalena Andersson.
Waraaqahaan laga heley shirkadda qareeen oo ka kooban malaayiin warbixinood ayaa baaritaakooda iyo dabagalkooda ka qeyb qaatey wariyayaal caalamka oo dhan ka socda ayna ka mid yihiin kuwa ka socda dalkan Sweden sida tusaale ahaan wakaaladda wararka ee TT iyo telefishinka SVT.
Warbixintan ayaa waxaa ku muujiyeen sida dad badan oo siyaasiyiin iyo maalqabeen ahi canshuuraha ey bixiyaan hoos ugu dhigeen, ilaa 2 000 oo qof oo dalkaan Sweden u dhalatey ayaana warbixintaas laga dhex heley.
Dadka maalqabeenka ah ee baaritaankaas lagu ogaadey ayaa waxaa ka mid ah Leif Östling oo ah madaxa guud ee hey’adda ganacsiga dalkan Sweden kaas oo si uu canshuurta uu bixiyo u dhimo , dalka Malta maalkiisa qaar ugu qarsadey.
Leif Östling ayaa fariin uu u soo direy wariyayaashii arrinkaas baarayey wuxuu ku sheegey in aysan sharci darro aheyn in qofku maalkiisa dalalkaa canshuurtoodu hooseyso ku meeleeyo, dhanka kalana uu lacago canshuur ah oo kor u dhaafeysa 180 malyan oo karoon uu Sweden iyo dalka Jarmalka labadaba canshuur ahaan u siiyey laga soo bilaabo sanadkii 2010-kii.
Sannadkii hore ayey aheyd markii la kashifey fadeexaddii la magacbaxdey "Waraaqihii Panama" taas oo lagu ogaadey maalqabeeno badan oo isticmaaley laqdabooyin ey canshuuraha la rabo bixintooda si qarsoodi ah uga fakadeen.
Markii waraaqahaas la magacbaxey Panama la kashifey ayey hey’adda canshuuraha dalkaani waxay dardargalisey baaritaanadeeda dhankaas ku saabsan taas oo aakhirkii ridey go’aan canshuureed oo qiyaastii ku dhow 200 oo malyan oo karoon.
Roger Persson-Österman oo ah macalin cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Stockholm ayaa sheegey in waraaqahaan imminka la kashifey ey raad baqdin iyo argagax leh u abuuri doonaan si la mid ah waraaqihii la magacbaxay waraaqihii Panama ee sanadkii hore la kashifey:
- Waxaan qabaa in falalkani yihiin kuwa hey’adda canshuuraha dalkaan imtixaan gaar ah ku ah sidii arrimaha noocaan oo kale ah ey ka yeeli laheyd, ayuu yiri Roger Persson-Österman oo wax ka dhiga jaamacadda Stockholm.